Monday July 22, 2019 - 09:37:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamada dowladda Kenya ee xoogga ku jooga deegaanno katirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa markale xasuuq ugeystay dad shacab ah oo aan waxba galabaysan xilli Kenyaatigu sare uqaadeen tacadiyada ka dhanka ah shacabka.
Wararka ka imaanaya deegaanka Raaskaambooni ee dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ayaa sheegaya in ciidamada Meleteriga Kenya ay halkaas ku dileen sedax qof shacab ah.
Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay si bareer ah utoogteen laba ruux xilli ay la socdeen gaari rakaab ah, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Kenya ay dadka shacabka gaariga kala degeen kadibna ay dileen.
Dilka kadib ayay ciidamada gummeysiga Kenya waxay gubeen gaarigii ay la socdeen labada qof ee ladilay, markii falkaas bahalnimada ah dhacay ayay shacabka ku dhaqan deegaanka Raaskaambooni waxay dhigeen dibad baxyo ballaaran.
Dad ka caraysan falka foosha xun ee ciidamada Kenya ay geysteen ayaa xoog ku galay saldhigyada Melleteriga KDF ee deegaanka Raaskaambooni waxaana lamaqlayay rasaas ay Kenyaatigu u adeegsanayeen shacabka caraysan.
Ma ahan markii ugu horraysay oo ciidamada gummeysiga Kenya ay dad shacab ah ku xasuuqeen gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose oo ay duullaan kusoo qaadeen dabayaaqadii sanaddii 2011.
Uhuru Kenyaata iyo Erdogaan Oo Cambaareeyay Qaraxii Saraakiisha Kenyaanka ah lagu laayay.